မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Thor2(The Dark World) - Movie Review
Posted by mabaydar at 2:30 PM
ရုပ်ရှင်မကြည့်ဖြစ်တာကြာပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးတော့ဖတ်ရတာကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို Si-Fi ကားမျိုးကို ဟိုးအရင် ကထဲက မကြိုက်တော့ သိပ်မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ ကာတွန်းကားပါ။ ကာတွန်းကားကြည့် ဖြစ်ရင်လဲ Review ရေးအုံးနော်။ :D
11/08/2013 3:22 PM
SweetPo Din said...
မကြည့်ရသေးတော့ သိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ Loki ကတော့ နာမည် အရမ်းကြီးနေတယ်။ ဟဲဟဲ မိုက်လဲမိုက်တာကို ကွိကွိ။
11/08/2013 3:52 PM
ဟုတ်ကြည့်ဖြစ်တာတွေတော့ရှိတယ်... ဒါပေမဲ့ up to date တွေတော့ မဟုတ်ဘူး...
11/08/2013 4:48 PM
Loki ပုံကိုက သဘောကောင်းတဲ့ပုံကြီးကို ပြီးတော့ သူ့ character ကလဲ လူဆိုးသာဖြစ်တာ ပျော်တတ်တဲ့ပုံမျိုး... ခိ
11/08/2013 4:49 PM
အဘိုးကြီးက ဘာလို့ရူးရတာလဲ။ Avengers မှာတုန်းက အကောင်းပါ။
Thor က အမြဲတမ်း သူများကို လမ်းခင်းပေးရတယ်။ ပထမကားတုန်းကလဲ Avengers ကို ခင်းပေးရတယ်။ အခုကားမှာလဲ Guardian of the Galaxies ကို ခင်းပေးရပြန်ပြီ။
11/09/2013 11:48 AM
Guardian of the Galaxies အကြောင်းတော့ မသိဘူး... အဘိုးကြီးက မရူးဘူး... သူက သိတာတွေအရမ်းများပြီး လုပ်ချင်တာပဲသိတယ်... အကျီင်္ဝတ်ဖိုဖို့တောင်ဝတ်တာလဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်.... သူပြောတာတွေကို လူတွေက မယုံပဲ အရူးလို့သတ်မှတ်ခံရတာ...
11/09/2013 3:03 PM
Kyawmin Thu said...
11/20/2013 4:40 PM
မမ thor ကိုဘယ်​ရုပ်​ရုင်​ရုံမှာတင်​တာလဲ
11/20/2013 4:41 PM
11/20/2013 4:42 PM
မမ thor ကိုဘယ်​ရုပ်​ရရှင်​ရရုံမှာပြတာလဲေ​နေပြည်ေ​တာ်​မှာလား​ရေရှ့ေ​ဆာင်​မှာလား
11/20/2013 4:44 PM
မောင်ကျော်မင်းသူရေ.. အစ်မက စကာင်္ပူမှာ ရုံတင်တုန်းက ကြည့်ဖြစ်တာပါ... မြန်မာပြည်မှာ ရုံတင်ရင်လဲ နာမည်ကြီးမယ်ထင်ပါတယ်... သတင်းရမှာပါ... ပြီးတော့ အစ်မဘလော့က Comment ကို moderation လုပ်ထားလို့ မောင်ကျော်မင်းသူ ရေးပြီးလဲ ကွန်မန့်က ချက်ချင်းမပေါ်ဘူး... အစ်မက approve လုပ်မှ ပွေမှာ... နောက်မို့ဆို spam တွေများလွန်းလို့...
11/21/2013 12:52 PM
so gyi said...
ဒီဇာတ်ကားမကြည့်ဘူးသေးဘူးမြန်မာကိုရောက်ရင်သွားကြည့်အုံးမယ်ဒီဇာတ်ကားက 3D လားရိုးရိုးရုပ်ရှင်လား
12/27/2013 9:24 AM
I also like Loki more than Thor. Thor hasaboring personality.
9/04/2014 7:31 PM
Nice Review. May i know ur fb acc?
4/20/2017 12:16 PM